Bosaso : Wasiir kuxigeenka ganacsiga Puntland oo xariga ka jaray New Panorama Hotel(Sawiro) – Puntland Chamber of Commerce
Bosaso : Wasiir kuxigeenka ganacsiga Puntland oo xariga ka jaray New Panorama Hotel(Sawiro)
by mohamed Salad( Ramaas Software) —	11th April 2015
Waxaa maalintii shalay ahayd si rasmi ah xariga looga furay hotel New Panorama ee magaalada Bosaso, iyadoona munaasbadda hotelkan oo dib u habayn lagu sameeyey ay kasoo qayb galeen masuuliyiin ka socday dowladda Puntland, rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland, ganacsatada, qaybaha nabadoonada iyo aqoonyahanada ee gobolka Bari.
Maamulaha hotel New Panorama Faarax Ibraahim ayaa ugu horayntii ka hadlay munaasabadda , waxaana uu sheegay inuu ku soo dhowaynayo hotelka oo casri ah dib u habayna lagu sameeyey.
Waxaa uu sheegay kadib dhismo waqti badan qaatay in lagu guulaystay hotelka in lagu soo kordhiyo adeegyo cusub oo aan horay uga jirin hotelada kale ee magaalada Bosaaso.
Gudoomiye kuxigeenka rugta ganaciga iyo warshadaha Puntland Maxamuud Caydiid Jaamac oo ka hadlay madasha ayaa sheegay inuu cusbayn hotelka , balse lagu sameeyey isbadal casri ah oo qayb ka noqonaya hormarka wadanka.
Waxaa uu ku booriyay kasoo qaybgalayaashii xafladda lagu daah furayay hotelka inay macaamiil la noqdaan oo ay ku xirmaan hotelka , iyadoona uu bogaadiyay ganacsatadu sida ay hadba ula jaanqaadayso hormarada wadanka ka socda.
Madaxa arimaha bulshada golaha deegaanka ee degmada Bosaaso Xildhibaan Cabdinuur Galayr oo madasha ka hadlay, waxaana uu ku amaanay hotelka oo horay loo oran jiray Panorama sidii horay uu uga qayb qaatay bilicda magaalada Bosaaso hadana dib u habayn lagu sameeyey.
Waxaa uu soo dhoweeyey dib u habaynta lagu sameeyey hotelka isagoo u rajeeyey inuu wax badan ka qaybqaato bilicda magaalada Bosaaso.
Nabadoon Cabdiqaadir Axmed Ibraahim Xarago ayaa ka hadlay xaflada , waxaana uu sheegay hada kadib inuu ka mid noqonayo hotelka kuwa ay ku xisaabtamayaan.
Nabadoon Xarago ayaa sheegay magaaladu inay u baahantahay dhul qurux badan , waxaana dhanka kale si hormarka uu usoo kordho fariin uu udiray shacabka oo uu ka codsaday nabadda in laga wada shaqeeyo oo bulshada looga baahanyahay inay la shaqeeyaan hay’adaha amaanka.
Ugu dambayn wasiir kuxigeenka ganacsiga Puntland Cabdirisaaq Nuur Cumar oo soo xiray xafladda hotelka New panorama lagu daah furay ayaa waxaa uu sheegay inuu yahay hormar soo kordhay , waxaana uu ku booriyay ganacsatadu inay maalgashi ku samaystaan wadankooda oo ay ka qayb qaataan hormarkiisa.